Iimpazamo ekufuneka ziyilwe ngumyili wegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaba uyafuna ukuzinikela kuyilo lwegraphic? Ngaba unayo encinci amava ngaphakathi kwicandelo lobugcisa bemizobo kwaye awukabinazo iziphumo ozifunayo? Nangona kuyinyani ukuba kunokubonakala ngathi ngumsebenzi onomtsalane kwabo bangazinikeliyo kuwo, inyani kukuba bahlangabezana nazo zonke izinto ezilindelweyo eziqhele ukwenziwa kweli candelo, kujika kube ngumsebenzi olula.
Kuqhelekile ukuba abantu abaninzi abaqale kweli candelo bazibonele ngaphakathi inqanaba lokuhla Kwaye, kunokwenzeka ukuba bayazibuza ukuba zeziphi iimpazamo abazenzileyo. Kungenxa yoko le nto ngezantsi siza kuthetha ngako Ezona mpazamo ziqhelekileyo zabaYili beMizobo kufuneka ziphephe ukwenza.
1 Iimpazamo AbaYili beMizobo kufuneka bayiphephe
1.1 Ukungabinaso ishedyuli yomsebenzi
1.2 Ukuphathwa gwenxa kwezoqoqosho
1.3 Ungazihoyi izinto ezithandwa ngabathengi bakho
1.4 Qhagamshela unxibelelwano
1.5 Khuthazwa ngumsebenzi wabanye
1.7 Ukuphelisa uqeqesho lobugcisa kunye nobugcisa
Iimpazamo AbaYili beMizobo kufuneka bayiphephe
Ukungabinaso ishedyuli yomsebenzi
Los Abaqulunqi abazimeleyo Bakhululekile ngokupheleleyo ukuba baququzelele iishedyuli zabo kwaye bajolise ekwenzeni iiprojekthi zabo ngokukodwa ngezo yure xa umsebenzi wabo unokuba nemveliso ngakumbi, nangona kunjalo, abo bayili andazi ukuba mabalisebenzise njani ixesha labo kwaye ungacwangcisi iishedyuli zomsebenzi ezithile ezifanelekileyo ngokwenene,peligroUkuphulukana nenzuzo.
Ukuphathwa gwenxa kwezoqoqosho
Nokuba abayili balungelelaniswe kakuhle, abanakuze babenalo ithuba lokuphila ngobuchule babo ukuba abayenzi i-a ucwangciso oluneenkcukacha zobalo-mali lwakho.
Kuyimfuneko ukuba abayili abazimeleyo, kwanangaphambi kokuba baqale ukusebenza kwaye basebenzise umsebenzi wabo wobuchwephesha, bacace gca malunga nokuba yintoni i- iinkqubo nenkcitho malunga naye, ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wakhe unenzuzo yokwenene.
Ungazihoyi izinto ezithandwa ngabathengi bakho
Ayisibaxhasi kuphela abaqhele ukwenza impazamo yokujonga abathengi abayili bemizobo njengengcali kwicandelo labo, ukuba nabo njengabantu abanele ngokupheleleyo, kodwa kwizihlandlo ezithile, ukuzinikezela kulo msebenzi kungakhokelela ekwenzeni impazamo ungahlalutyi ngokufanelekileyo zithini iimfuno zorhwebo, kunye nabaxhasi abasebenzela bona.
Ngophononongo lwangaphambili, kunokwenzeka ukunqanda amaxhala amaninzi kwaye nokuthintela ukulibaziseka okunokwenzeka nokungafunekiyo xa uhambisa umsebenzi.
Ngendlela efanayo yokuba isisiseko yenza umfowunelwa wokuqala Ngabathengi abanokubakho, ukugcina ubudlelwane kunye nabo ngelixa uphuhlisa inkqubo yoyilo ebandakanyeka kumsebenzi woyilo, nayo. Nangona ayinyanzelekanga ukuba ibekhona ngalo lonke ixesha, inyani kukuba bayili abaziingcali akufuneki bakuphephe ukunxibelelana nabathengi babo.
Khuthazwa ngumsebenzi wabanye
Khuthazwa lolunye uyilo kwaye ufumane ngaphambi kokuqalisa iprojekthi, kwiimeko ezithile kunokuba luncedo kakhulu, ngakumbi xa uqala ngaphakathi kommandla wobugcisa bokuzoba, nangona kunjalo, nini banolwazi olusisiseko kwaye amava amancinci ayimfuneko ukuzehlula kwabanye abaqulunqi, ukuze uphile kwicandelo elinokhuphiswano njengalo.
Ngaba kunjalo kanye uyilo kunye nophawu lomntu ngamnye egcina ibangela ukuba umthengi akhethe phakathi komyili omnye okanye omnye.
Ukuzithemba kuvela ukuba umba obaluleke kakhulu Oko akufuneki kulahleke, nokuba uluhlobo olunjani lomsebenzi ozinikeleyo kuwo, ngakumbi ukuba ubuchwephesha kwezobugcisa, kuba ezi zinto zidinga ukuqala kunye nobukrelekrele, zombini ezi mpawu zomelezwa luphawu oluqinisekileyo nolomeleleyo.
Ukuphelisa uqeqesho lobugcisa kunye nobugcisa
Ithiyori yeencwadi kunye nokusebenza, iziphumo imiba ebalulekileyo yoqeqesho lomsebenzi ezo zihlala zivela kwindaleko rhoqo, ke akufuneki ucinge ukuba uyingcali kwaye ulibale ukufumana ulwazi olutsha.
Oku kuyakuba sisininzi se iimpazamo omele uziphephe ewe okanye ewe, jonga ke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iimpazamo ekufuneka ziyilelwe ngumyili ngamnye wegraphic
Uyenza njani ikhowudi yeQR yokukhuthaza ngakumbi ukuyila